16 taona taorian’ny mariazinay dia nisaraka am-pifaliana izahay mivady. 19 taona aho no nanam-bady, nasain’ny ray aman-dreniko niakatra teto an-drenivohitra hatao raharaha amin’ny tovolahy iray tanindrazana aminay avy eny Andrefandrefana eny ihany, saingy efa nihary ela teto Antananarivo. Iray volana mialohan’ny mariazy vao nihaona izahay, nifampizara fiainana fotsiny tsotra izao, nefa olona mbola tsy hitako sady tsy fantatro akory. Izahay rahateo dia olona mpankatoa ray aman-dreny, ka na izaho na izy dia samy niezaka ny hifaly tao anatin’ilay fanambadiana namboarina.
5 taona taorian’ny mariazy no nanomboka nikasi-tanana ahy izy. Nafeniny ahy koa ny momba ny resa-bola fa vady mpanatanteraka baiko sy mpikarakara no asako ao an-trano ary zara raha mba afaka mivoaka. Efa im-betsaka aho no nitaraina tamin’ny ray aman-dreny sy ireo rafozako ary efa nanomboka dingana ho amin’ny fisaraham-panambadiana. Ny hany valin-teny sy torohevitra azoko dia ny hoe : “ny tokantrano fihafiana” ; “ny ankizy jerena” , “ mandefera” ! Dia tena ny ankizy tokoa sisa no niraisanay. Leo tanteraka aho, ary izy koa dia hitako fa mihafihafy sy voatery mandeha ivelan’ny tokantrano. Raha iny izahay avy nivavaka iny kosa dia hoy aho mantsy azy : nivavaka isika androany, navelako avokoa ny helokao ary mandehana amin’ny fahalalahana. “Fa ahoana ? ” hoy izy. Namaly aho : “Na izaho na ianao dia samy tsy sambatra ao anatin’ity tokantranontsika ity. Andao hojerentsika mivantana ny fiainana fa tsy hiolanolana sy ho sarontsaronana foana intsony”. Nangina izy, tsy niteny. Tsy nikasi-tanana ahy intsony koa.
Telo volana tao aorian’izay izy no nilaza tamiko fa hanorim-piainana vaovao, hanararaotra ny andro sisa izahay, miaraka amin’izay olona tena tia anay. Samy nisampana ny lalanay. Ny ankizy koa aza dia tsapanay fa mivelatra sy mahazo aina kokoa, raha mitaha amin’ilay mahita anay miady lava, ka manjary miferinaina sy tratran’ny rarintsaina. …
Dia hoy aho amintsika vehivavy mikasa ny hanambady : ny hoe manambady dia tsy famalifaliana na fisaorana ny ray aman-dreny nanabe, tsy satria efa mandroso taona aho, tsy hoe : lasa alohako ny zandriko, tsy hoe : efa nanambady avokoa ny olon-tiako teo aloha. Fandrika be koa ny hoe : noho ny antony arak’asa no tsy maintsy hanambadiana haingana be. Tsy hoe : mahatsiaro irery koa dia ny fanambadiana no vahaolana. Antony iray ihany no tokony hanambadiana, dia ny fananana hetaheta hiaraka sy hizaka olona iray, noho ny fitiavana azy. Rehefa mandeha ny taona dia mety hihalefy ny fitiavana, fa ny firaisan-tsaina kosa dia mamelona ny fitiavana mandrakariva.